အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Mmthinker - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြင်ရမယ်ထင်တာလေးတွေ တွေ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ ပြောသွားချင်ပါတယ်။ --Mmthinker ၀၈:၃၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အခု သမိုင်းဆိုင်ရာေတွကို တင်နေပါတယ်။ မူလ စာစီ စာရိုက်ပြီး စုဆောင်းသူ ကိုလဂွန်းအိန်နဲ့ သဘောတူညီမှုယူပြီး တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလဂွန်းအိန်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ --Mmthinker ၀၅:၄၆၊ ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
၁ ဗဟို မျက်နှာစာမှ အမှားများ
၂ အတွင်းဖက် မျက်နှာစာမှ အမှားများ
၃ Request for Help, please
၄ Thankyou very much
၅ polish the main page
၆ Wiki Sysop request
၇ Article request
၉ Moving page to your user page
၁၀ Translation request
၁၁ Article translation/collaboration request
၁၂ Thinker Return
၁၅ ကျော်ကျော်အောင် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၁၆ အိုးဝေဘလော့ဂ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၁၇ ဗုဒ္ဓ FM အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၁၈ ဘုံဘေ အိန္ဒိယ နည်းပညာတက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၁၉ ဖူဒန် တက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၂၀ Your advanced permissions on my.wikipedia
ဗဟို မျက်နှာစာမှ အမှားများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အတ္ထုပတ္ထိ မဟုတ်ပါ။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ သာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး တဝမ်းပူတွင် တဝမ်းပူပင် ဆင့်ရပါမည်။ --Mmthinker ၁၁:၁၀၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Navigation တွင် ရေးထားသော လှူဒါန်းမှုကလည်း မှားနေပါသည်။ လှုဒါန်းမှု ဖြစ်နေပါသည်။ ပြင်ပါရန်။ --Mmthinker ၁၁:၁၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မည်သည့်စာမျက်နှာများမှညွန်းထားသည်မှ ညွန်းကို ညွှန်းဟု ပြင်ရန်။ ဆက်ဆပ်သော အပြောင်းအလဲများတွင် ဆက်စပ်ဟု ပြင်ရန်။ --Mmthinker ၁၁:၁၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အတွင်းဖက် မျက်နှာစာမှ အမှားများ[ပြင်ဆင်ရန်]
တွေ့မိသလောက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ redirect လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါကြောင်း။ --Mmthinker ၀၅:၄၂၊ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Request for Help, please[ပြင်ဆင်ရန်]
Could you kindly help me translate these passages into the unique and brilliant Burmese language? Please.
"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used".
"The church, established by the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the apostolic time".
"The Second Coming of Jesus will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned".
Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 ၂၁:၁၆၊ ၁ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I saw that the related translation of the first of these passages is found in this wiki []. I check that and I recommend this translation as original translated work of Rev. Judson. For the translation of Holy Bible, Rev. Judson's translation was the best in Burmese. I can't go beyond him. I copy here:
ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူ၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင် တို့၌ အသက်မရှိ။ ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငာထမြောက်စေမည်။ ငါ၏အသားသည် စားစရာကောင်း၏။ ငါ၏ အသွေးလည်းသောက်စရာကောင်း၏။ ငါ၏အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။
"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used."
Holy Communion သည် သခင်ယေရှု၏ ကားစင်၌ အသက်အသေခံတော်မှုခြင်းကို အထိမ်းအမှတ်ပွဲအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် အလိုအရ ကျင်းပသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသား၊ အသွေးကို စားယူ သောက်သုံးပြီး ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိနေခြင်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးသော ရှင်သန်ထမြောက်သည့်နေ့တွင် ထာဝရအသက်ကို ရကြမည်။ ထိုရည်ညွှန်းကျင်းပမှုကို တတ်နိုင်သမျှ မပြတ်ပြုအပ်သည်။ တစေးမရောသော ပေါင်မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်ကိုသာ သုံးစွဲကျင်းပပါ။
I will help to translate another two passages.
"The church, established by the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the apostolic time."
ရှင်သန်မြောက်တော်မူမည့်ကာလ ြမင့်ြမတ်သော ဝိဉာဉ်တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်တည်တော်မူသောကျောင်းတော်သည် ဟောကြားတော်မူထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည် တည်စေမည့်ကျောင်းတော် ဖြစ်သည်။
"The Second Coming of Jesus will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned."
သခင်ယေရှု၏ ဒုတိယတဖန် ကြွလာတော်မူခြင်းသည် တရားစီရင်ရန်အလို့ငှာ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကမ္ဘာမြေသို့ ကြွချီရာ နောက်ဆုံးသောနေ့တွင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ တရားစောင့်သူတို့သည် ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုရမည်။ ထို့အတူ အပြစ်ရထိုက်သူတို့သည်လည်း ထာဝရ ပျက်စီးြခင်း တိုင်မည်။
--Mmthinker ၀၃:၂၁၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thankyou very much[ပြင်ဆင်ရန်]
THANKYOU SO MUCH Mr. Mmthinker for your Excellent Translation effort!
May God Bless You and may Burmese Wikipedia prosper!
Our Burmese TJC members will also be very grateful of your edits; I think most of them do not yet have access to the computer or the internet.
(In the future if you want any of your favourite articles to be translated into the Chinese language, then I would certainly be glad help you.)
I have expressed my support for your request to become an administrator of the Burmese language edition of Wikipedia.
Yours Sincerely, From --Jose77 ၀၈:၁၀၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Welcome Joe77. --Mmthinker ၁၁
၁၂၊ ၃ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
polish the main page[ပြင်ဆင်ရန်]
There are some blank 'entries' with red color at front page, So I try to fill all of those, but not so complete ones. Please help by contribute to those entries to be helpful. မျက်နှာစာမှာ အရောင်နီနေတဲ့ ပုဒ်လွတ်တွေကို လိုက်ဖြည့်နေတယ်။ တချို့လည်း မြန်မာ ဘာသာစကား သဘောသဘာဝအရ ကြံဖန် ဖြည့်ရတာပါပဲ။ အဆင့်သင့်သလို ဖြည့်သွင်းကြပါကုန်။ mm thinker ၁၃:၂၂၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wiki Sysop request[ပြင်ဆင်ရန်]
Please make an official request to becomeasysop on metawiki page. The link is here. . Please makeareference to your local sysop request page when you submit sysop request on metawiki. You can look at the example page for Hintha here. . Good Luck. --Zawthet ၁၇:၂၂၊ ၁၁ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank for your guide KZH. But I really poor in technical knowledge. I eager to write and edit posts. I go and check those pages and drunk without drink. I will check it again. :) --Mmthinker ၁၂:၄၄၊ ၁၃ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မီတာဝီကီမှာ လျှောက်လိုက်ပါပြီ။  --Mmthinker ၀၇:၄၁၊ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Ko Thinker, can you please translate local Adminship request to English? Steward need to review it and I am sure that he won't understand Burmese. hehe. :D --Zawthet ၀၈:၄၆၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဟေ့လူကြီး ..ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်း..။ စာလည်း ဝင်မရေးတော့ပါလားဗျ..။ --လဂွန်းအိန် ၁၂:၅၉၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရေးပါတယ်။ နားနားပြီးတော့ပေါ့။ --Mmthinker ၁၀:၂၃၊ ၂ မေ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Hi သင်ကာ! Would you be so kind to translate part of this article into the wonderful Burmese language? It's listed as one of the articles every Wikipedia should have. Please. 3-4 lines would be enough. Thank you very much. --Mer De Glace ၁၀:၀၃၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Dear Glace. There isatranslation of Sir Isaac Newton in my.wiki. But still need to add more. Pls check here  --Mmthinker ၀၇:၄၅၊ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Are you fun17092008 in YouTube?--125.25.229.192 ၀၇:၁၈၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Moving page to your user page[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုသင်ကာ။ ကျွန်တော် ကိုသင်ကာရဲ့ ဝီကီစာမျက်နှာကို ယူစာ စာမျက်နှာနဲ့ Talk Page ကို ြပန်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ Wikipedia Notablity Guideline နဲ့ Conflict of Interest ကြောင့်ပါ။ တခြားယူဆာတွေ သူတို့နာမည်နဲ့ သူတို့ ပေ့ချ်တွေ လုပ်ကြတာ၊ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွက် ပေ့ချ်တွေ လုပ်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ လက်မခံဘဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းကျမှ မျက်စိမှိတ်နေတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် မကောင်းဘူး ထင်လို့ပါ။ ကိုသင်ကာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Zawthet ၁၇:၂၂၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရပါတယ် ကိုဇော်သက်၊ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပါ ရွှေ့ပါဗျာ။ အဆင်ပြေကြဖို့ပဲ အရေးကြီးပါကြောင်း mm thinker ၁၀:၃၆၊ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Hello Burmese Wikipedian! Could you translate Call of Duty: Black Ops II, Selena Gomez, Demi Lovato, Katy Perry, and Thai National Anthem into the wonderful Burmese language? If you have much time, please translate them as you can. --Reform (talk) ၀၈:၀၇၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Article translation/collaboration request[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi Mmthinker, how are you? Mate, I am trying to find an editor/s who can help by translating User:Russavia/Polandball into Burmese. I was wondering if we could makeatrade?
If you could translate that article into Burmese for me, I would be happy to upload approximately 40-50 Burmese aviation photos to Commons from amongst the 200,000 I have permission to upload. I have uploadedanumber of photos relating to Burmese aviation to give youabrief idea of what I can upload, and I am keepingagallery at User:Russavia of photos uploaded.
Would you be interested in sucha"trade"? Do let me know, either by responding here, or on my talk page, or by emailing me. Cheers, Russavia (talk) ၁၀:၄၆၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝီကီနဲ့ ကိုယ်နဲ့က ပူးတုံခွာတုံ ဖြစ်နေတယ် ...။ တခါတလေ လနဲ့ချီပြီး မရေးဖြစ်ဘူး ...။ အရင်းက ရေးကြ ပြောကြတာတွေ ပြန်ဖတ်တော့ လွမ်းစရာကြီး ...။ ခုတလော ပြန်ရေးဖြစ်တယ် ...။ ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် တည်းဖြတ်တာနဲ့ လိုတာတွေ လိုက်ဖြည့်တာလောက်ပါပဲ ...။ Ko Thinker ၀၇:၀၉၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၄ (UTC)
ဆောရီးပါ. ဘယ်လိုပြန်ရေးရမှန်းမသိသေးလို့ ဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်. ကျိုချက် လို့တွေ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ နောက်လဲ ခုလိုပြောပြ။ ပြင်ပေးပါ။
Hello. I found that you are the most active administrator. (There are now only3admins on this project.) Category:Deleteme is piled up. Please clear them. --Octahedron80 (talk) ၀၉:၁၆၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ok. I will do it as far as I can. Ko Thinker ၀၉:၀၃၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၅ (UTC)
Could I request Wikipedia:Myanmarsar Help & Wikipedia:Font to be semi-locked? Because those pages have been vandalised from IPs foralong time. --Octahedron80 (talk) ၀၁:၁၀၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျော်ကျော်အောင် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျော်ကျော်အောင် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၁၈၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
>>>ဖျက်လိုက်ပါ။ ဝီကီစရေးကြစဉ် စမ်းသပ်ပြီး တင်ထားတာတွေလည်း ရှိတယ်၊ နောက်မှဖြည့်မယ်ဆိုပြီး မထည့်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ Mmthinker ၁၀:၂၀၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
Done. Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၃၄၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အိုးဝေဘလော့ဂ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အိုးဝေဘလော့ဂ် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၅၈၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဗုဒ္ဓ FM အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗုဒ္ဓ FM စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၉:၂၂၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘုံဘေ အိန္ဒိယ နည်းပညာတက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘုံဘေ အိန္ဒိယ နည်းပညာတက္ကသိုလ် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G12 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသို့မဟုတ် ပုံသည် မူပိုင်ခွင့်ကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ချိုးဖောက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး သို့မဟုတ် ပုံသည် http://www.mcntv.biz/documentary/17812/ မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းပြချက်များအရ အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများမှ ရယူထားသော မူပိုင်ခွင့်ရှိသော စာသားများနှင့် ပုံများအား ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သင်၏ ထည့်သွင်းရေးသားထားမှုများသည်လည်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံနှိပ်မီဒီယာများမှ အချက်အလက်များအား ရင်းမြစ်အဖြစ် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝါကျများ အား ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပြီး မကြာခဏ ဖောက်ဖျက်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၂၇၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဖူဒန် တက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖူဒန် တက္ကသိုလ် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G12 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသို့မဟုတ် ပုံသည် မူပိုင်ခွင့်ကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ချိုးဖောက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး သို့မဟုတ် ပုံသည် http://www.mcntv.biz/documentary/17852/ မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းပြချက်များအရ အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများမှ ရယူထားသော မူပိုင်ခွင့်ရှိသော စာသားများနှင့် ပုံများအား ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သင်၏ ထည့်သွင်းရေးသားထားမှုများသည်လည်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံနှိပ်မီဒီယာများမှ အချက်အလက်များအား ရင်းမြစ်အဖြစ် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝါကျများ အား ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပြီး မကြာခဏ ဖောက်ဖျက်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၃၆၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Your advanced permissions on my.wikipedia[ပြင်ဆင်ရန်]
Yours faithfully. --علاء (ဆွေးနွေး) ၁၈:၂၃၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Mmthinker&oldid=645996" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။